Nanatevina Ireo Fihetsiketsehana Ny Iraniana Ho Fanohanana An’i Kobane, Sisintany Syria-Tiorkia, Ataon’ny ISIS Fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2014 3:02 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Español, বাংলা, English
Nidina an-dalambe ireo mpanao fiihetsiketsehana ao Iran sy ny hafa manerantany mba hanohana am-pahibemaso ny vahoakan'i Kobane, tanàna Syriana Kiorda eo akaikin'ny sisintany izay miezaka mafy manohitra ny ISIS.
Nanamafy ny daroka an'habakabaka ny firaisankina tarihin'i Etazonia nanomboka Talata, izay namelezana ny ISIS tamin'ny manodidina an'i Kobane, niantso an'i Etazonia ny governemanta Tiorka miaraka amin'ny tafika Kiorda mba hanamafy ny ezak'izy hirotsaka an-tanety hisorohana ny tanàna tsy ho voafehin'ny ISIS tanteraka.
“Tsy hifarana ny fampihorohorona … raha tsy hoe miara-miasa amin'ny alalan'ny bemidina an-tanety isika”, hoy ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan tamin'ny vaovan'ny Al Jazeera omaly. “Milaza amin'ny Tandrefana aho – fa tsy hitera-bahaolana ny fidarohana baomba an'habakabaka.”
Nidina an-dalambe ho firaisankina miaraka amin'ny vahoakan'i Kobane ny Iraniana tao an-tanànan'i Sandaj, araka ny hita ao amin'ity lahatsary nozarain'i Radio Farda ity: